1 Samuweli 20 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
1 Samuweli 20:1-42
20 UDavide wabaleka wemka+ eNayoti yaseRama. Noko ke, wafika waza wathi phambi koYonatan: “Ndenze ntoni na?+ Siyintoni na isiphoso sam, yaye siyintoni na isono endisenzileyo phambi koyihlo, kuba ufuna umphefumlo wam?” 2 Wathi yena kuye: “Makube lee oko!+ Akuyi kufa. Khangela! Ubawo akayi kwenza nto inkulu okanye nto incinane aze angayityhileli indlebe yam;+ kungasiphi ke isizathu anokuthi ubawo awufihle lo mbandela kum?+ Oku akwenzeki.” 3 Kodwa uDavide wafunga+ esongezelela waza wathi: “Ngokuqinisekileyo uyihlo umele azi ukuba ndikholekile emehlweni akho,+ ngoko angathi, ‘UYonatan makangakwazi oku ngokoyikela ukuba angaba buhlungu.’ Kodwa, enyanisweni, njengoko uYehova ephila+ nanjengoko umphefumlo wakho uphila,+ linyathelo nje elinye phakathi kwam nokufa!”+ 4 Waza uYonatan wahlabela mgama wathi kuDavide: “Nakuphi na oko umphefumlo wakho ukutshoyo ndiya kukwenzela kona.” 5 Wathi uDavide kuYonatan: “Khangela! Ngomso kuthwasa inyanga,+ yaye mna ngokwam ndifanele, nakanjani na, ndihlale nokumkani ekudleni; uze ke wena undindulule, ndizifihle+ endle kude kuhlwe ngemini yesithathu. 6 Ukuba uyihlo angandifuna, wena ke umele uthi, ‘UDavide ucele ngokunyamekileyo ukukhe athi tshalala abaleke aye eBhetelehem+ isixeko sakowabo, ngenxa yokuba kukho umbingelelo waminyaka le wentsapho yonke apho.’+ 7 Ukuba angathi, ‘Kulungile!’ oko kuthetha uxolo kumkhonzi wakho. Kodwa ukuba angaba nomsindo, uze wazi ukuba uzimisele kokubi.+ 8 Uze ke umenzele ububele bothando umkhonzi wakho,+ kuba umzise emnqophisweni+ kaYehova umkhonzi wakho kunye nawe. Kodwa ukuba kukho isiphoso kum,+ ndibulale ngokwakho, ekubeni kutheni ufanele undise kuyihlo?” 9 Wathi ke uYonatan: “Makube lee oko ngokuphathelele wena! Kodwa ukuba ndingazi ukuba kukho ububi obumiselweyo ngubawo ukuba bukwehlele, andiyi kukuxelela na?”+ 10 Wandula ke uDavide wathi kuYonatan: “Ngubani na oya kundixelela enoba oko uyihlo akuphendula ngako kungqwabalala?” 11 NoYonatan ke wathi kuDavide: “Khawuze, masiphume siye endle.” Ngoko bobabini baphuma baya endle. 12 Waza uYonatan wahlabela mgama wathi kuDavide: “UYehova uTHIXO kaSirayeli+ [makabe lingqina]+ lokuba ndiya kumgocagoca ubawo ngeli xesha ngomso, okanye ngosuku lwesithathu, yaye ukuba ke unotyekelo oluhle ngakuDavide, andiyi kuthumela na ke kuwe ndize ngokuqinisekileyo ndikutyhile oko endlebeni yakho? 13 Ngamana uYehova angenjenje kuYonatan aze ongeze+ ukwenjenjalo xa ndithe eneneni, ukuba kunokwenzeka kubonakale kulungile kubawo ukwenza ububi kuwe, andayityhilela oko indlebe yakho ndize ndikundulule, uze wena ngokuqinisekileyo ungahambi ngoxolo. Yaye ngamana uYehova angaba nawe,+ kanye njengoko wayenobawo.+ 14 Akuyi kuthi na ke wena, ukuba ndiya kuba ndisaphila,+ ewe, akuyi kundenzela ububele bothando bukaYehova na, ukuze ndingafi?+ 15 Yaye akuyi kubunqumla ububele bothando endlwini yam ukusa kwixesha elingenammiselo.+ Kwaye, naxa uYehova ezinqumla iintshaba zikaDavide, zonke ngazinye phezu komhlaba, 16 igama likaYonatan aliyi kunqunyulwa endlwini kaDavide.+ NoYehova umele alifune esandleni seentshaba zikaDavide.” 17 Ngoko uYonatan wafunga kwakhona kuDavide ngenxa yothando lwakhe ngaye; kuba wamthanda njengokuthanda kwakhe umphefumlo wakhe.+ 18 Waza uYonatan wahlabela mgama wathi kuye: “Ngomso kuthwasa inyanga,+ yaye ngokuqinisekileyo uya kufunwa, ngenxa yokuba isihlalo sakho siya kuba sodwa. 19 Kwaye ngokuqinisekileyo ngosuku lwesithathu uya kufunwa kakhulu; umele ke uze kuloo ndawo wawuzifihle+ kuyo ngosuku lokusebenza, uze ke uhlale kufuphi neli litye lilapha. 20 Mna ke, ndiya kutolela ecaleni kwalo iintolo ezintathu, ndiza kuzithumela apho kwitekeni. 21 Yaye, khangela! ndiya kuthumela umlindi, ndisithi, ‘Yiya, uzifumane iintolo.’ Ukuba ngokuthe ngqo ndingathi kumlindi, ‘Khangela! Iintolo zikweli cala lakho, zithabathe,’ woza ke wena, kuba oko kuthetha uxolo kuwe nokuba akukho nto itheni, ephila nje uYehova.+ 22 Kodwa ukuba ndingathi kwigatyana elo, ‘Khangela! Iintolo zimgama kuwe,’ hamba, kuba uYehova ukundulule. 23 Yaye ilizwi ke lona eli silithethileyo,+ mna nawe, ewe, ngamana uYehova angaphakathi kwam nawe ukusa kwixesha elingenammiselo.”+ 24 UDavide wazifihla endle.+ Kwaza kwaba kukuthwasa kwenyanga, nokumkani wahlala esidlweni ukuze adle.+ 25 Yaye ukumkani wayehleli esihlalweni sakhe njengakwezinye izihlandlo, esihlalweni esingaseludongeni; uYonatan ejongene naye, noAbhinere+ ehleli kwicala likaSawule, kodwa indawo kaDavide yayiyodwa. 26 USawule ke akazange athethe nto konke konke ngaloo mini, kuba wazixelela oku: “Kukho okuthile okwenzekileyo khon’ ukuze abe akahlambulukanga,+ kuba akahlanjululwanga.” 27 Kwathi ke nangemini esemva kokuthwasa kwenyanga, ngosuku lwesibini, indawo kaDavide yaqhubeka iyodwa. Wathi uSawule kuYonatan unyana wakhe: “Kutheni na unyana kaYese+ engezanga ekudleni izolo nanamhlanje?” 28 Ngoko uYonatan wamphendula uSawule wathi: “UDavide ucele ngokunyamekileyo kum ukuba akhe athi tshalala aye eBhetelehem.+ 29 Uye waqhubeka wathi, ‘Ndindulule, nceda, ngenxa yokuba sinombingelelo wentsapho esixekweni, yaye ndiyalelwe ngumntakwethu kanye. Ke ngoko, ukuba ndifumene ukukholeka emehlweni akho, makhe ndimke, ndiyacela, ndiye kubona abantakwethu.’ Kungenxa yoko le nto angezanga etafileni yokumkani.” 30 Wandula ke wavutha umsindo kaSawule+ kuYonatan waza wathi kuye: “Nyanandini wentombi enemvukelo,+ andiyazi kakuhle na into yokuba unyula unyana kaYese ukuze uhlazeke wena nobuze bukanyoko buhlazeke?+ 31 Kuba yonke imihla unyana kaYese ephila kulo mhlaba, akuyi kumiselwa ngokuqinileyo wena nobukumkani bakho.+ Ke ngoko thumela uze umzise kum, kuba umiselwe ukufa.”+ 32 Noko ke, uYonatan wamphendula uSawule uyise waza wathi kuye: “Kutheni efanele abulawe?+ Wenze ntoni na?”+ 33 Waza uSawule wambinza ngomkhonto ukuze amxabele;+ uYonatan wazi ukuba uyise wayemisele ukuba abulawe uDavide.+ 34 Ngoko nangoko uYonatan waphakama etafileni evutha ngumsindo,+ waza akadla sonka ngosuku lwesibini emva kokuthwasa kwenyanga, kuba waba buhlungu ngoDavide,+ ngenxa yokuba uyise wayemthobile.+ 35 Kwathi ke kusasa uYonatan waphuma waya endle kwindawo emiselweyo kaDavide,+ nomlindi oselula wayekunye naye. 36 Wathi ke kumlindi wakhe: “Khawubaleke, uzifumane iintolo ezi ndizitolayo.”+ Wabaleka umlindi, waza yena ke walutola utolo ukuze lugqithe ngaphaya kwakhe. 37 Xa umlindi weza kufikelela kwindawo yotolo uYonatan awayelutolile, uYonatan wamemeza emva komlindi waza wathi: “Utolo alukho mgama na kuwe?”+ 38 Yaye uYonatan waqhubeka ememeza emva komlindi: “Ngokungxama! Khawuleza! Musa ukuma ngxi!” Nomlindi kaYonatan wazithabatha iintolo waza weza ke enkosini yakhe. 39 Ke yena umlindi, wayengazi nantoni na; nguYonatan noDavide kuphela ababesazi ngalo mbandela. 40 Emva koko uYonatan wanika umlindi izixhobo zakhe waza wathi kuye: “Hamba, zithabathe uzise esixekweni.” 41 Wahamba umlindi. Ke yena uDavide, wesuka kufuphi apho waya ngasemzantsi. Wandula ke wawa ngobuso emhlabeni+ waza waqubuda izihlandlo ezithathu; baqala ukwangana+ nokulilelana, wada uDavide waba utsho kakhulu.+ 42 Waza uYonatan waqhubeka wathi kuDavide: “Hamba ngoxolo,+ ekubeni sifungile,+ sobabini, egameni likaYehova, sisithi, ‘Ngamana uYehova angaba phakathi kwam nawe naphakathi kwenzala yam nenzala yakho ukusa kwixesha elingenammiselo.’”+ Wesuka ke uDavide wahamba, noYonatan wangena esixekweni.